Kaung Sithu's Geology Blog
Myanmar Active Faults Database
Mount Popa Global Geopark
Department of Mine, Myanmar
Myanmar Surveyors Group
သိပ္ပံ သင်္ချာ နှင့် ရူပဗေဒ
Myanmar PGR Group
Myanmar Palmistry Blog
BSc (Hons), MSc, MRes, PG Dip in GIS and RS
Demonstrator, Department of Geology, University of Yangon
Geographic Information System (GIS) ဆိုတာ
GIS ဆိုတာ ကမ္ဘာမြေ မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ ရှိနေတဲ့ ပထ၀ီဝင်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်တွေကို အသေးစိတ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ လေ့လာနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ tool တခု ဖြစ်ပါတယ်။ GIS မှာ အရွယ်အစားစုံပြီး ဒီဇိုင်း အမျိုးမျိုးသော မြေပုံတွေကို ရေးဆွဲထုတ်လုပ်နိုင်ဖို. စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသည့်အပြင် မှတ်သားစရာတခုက GIS ဆိုတာ မြေပုံတွေပဲ သီးသန်.ရေးဆွဲနိုင်တဲ့ ကွန်ပြူတာစနစ်တခုသာ မဟုတ်ပါ။
GIS ရဲ. အစ စာလုံးဖြစ်တဲ့ ပထဝီဝင် (geography) ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဟာ ကမ္ဘာမြေ မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ ရှိနေတဲ့ သွင်ပြင်လက္ခဏာများအားလုံးကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ GIS ဆိုတာ ပထဝီဝင်ဘာသာရပ် ဆိုင်ရာ အဖွဲ.အစည်တစ်ခုက ပိုင်ဆိုင်တဲ့ သတင်းအချက်အလက် စနစ်တခုရယ်လို. ဆိုလိုတာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။
GIS ဟာ ကွန်ပြူတာကို အခြေခံတည်ဆောက်ထားတဲ့ စနစ်တခုသာဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ.မြေ မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကို စနစ်တကျ ထည့်သွင်းခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းတွက်ချက်ခြင်း၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာခြင်း နှင့် ထုတ်ယူ သုံးစွဲခြင်းတွေကို ပြုလုပ်စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ အချက်အလက် အသစ်တွေကို ရှာဖွေဖို. နဲ. real-world problem တွေကို ဖြေရှင်းနိုင်ဖို. အထောက်အပံ ပေးပါတယ်။
GIS ကိုလေ့လာရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်
GIS ကို မလေ့လာခင်မှာ ပထမဆုံး ကိုယ့်ကိုယ်ကို မေးခွန်းထုတ်ကြည့်ပါ။ ဘာအတွက် ဒီ GIS ကို သင်ယူချင်တာလဲ ၊ ဘာကြောင့် ဒီ GIS ကို နားလည် တတ်မြောက်ချင်တာလဲပေါ့။
တချို.က GIS ပညာရှင်တယောက်အနေနဲ. အသက် မွေးဝမ်းကြောင်းချင်တာ၊ တချို.က မိမိ သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်၊ သုတေသန နယ်ပယ်တွေမှာ GIS နည်းပညာကို အသုံးချဖို. လိုအပ်လို.၊ တချို.ကလည်း GIS ကရလာတဲ့ ရလဒ်တွေကို အခြေခံပြီး အရေးတကြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမယ့် လုပ်ငန်းတွေ အတွက် GIS ကို နားလည်ဖို.၊ သိဖို.လိုအပ်သူတွေ စသဖြင့် အမျိုးမျိုးရှိကြပါတယ်။
GIS မှာပါဝင်သည့် အစိတ်အပိုင်းများ
GIS ကို စတင်အသုံးပြုနိုင်အတွက် hardware ခေါ် computer တလုံး မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါတယ်။ desktop ဖြစ်ဖြစ် ၊ laptop ဖြစ်ဖြစ် မိမိ အသုံးပြုမည့် ပမာဏပေါ်မူတည်ပြီး spatial data တွေ သိုလှောင်နိုင်ဖို.အတွက် လုံလောက်တဲ့ hard disk space လဲရှိရပါမယ်။
နောက် GIS software တွေလိုအပ်ပါတယ်။ မိမိ လိုအပ်ချက် ရည်ရွယ်ချက် ပေါ်မူတည်ပြီး အမျိုးမျိုးသော GIS softwware တွေကို ရွေးချယ် အသုံပြုနိုင်ပါတယ်။ Open source desktop GIS တွေသုံးချင်ရင် QGIS, SAGA GIS, GRASS GIS စတဲ့ GIS software တွေကို free download ချပြီး သုံးနိုင်တယ်။ data တွေအများကြီးကို စီမံခန်.ခွဲဖို. အတွက်ဆို PostGIS လို Spatial database management software တွေကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Basic GIS Data Types: Spatial vs Attribute
GIS မှာ geographic or spatial data နှင့် attribute or non-spatial data ဟူ၍ အချက်အလက် data နှစ်မျိုးနှစ်စားရှိပြီး spatial data က အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ Spatial data ကို map ၊ satellite နဲ. GPS survey တွေကနေ ရနိုင်ပါတယ်။ attribute data တွေကတော့ observation ကနေရပါတယ်။ official, survey, interviewer တွေကနေ attribute data တွေရနိုင်ပါတယ်။ Spatial data က feature တွေဘယ်နေရာမှာ ရှိနေလဲ ပြောတယ်။ coordinate ပေါ်အခြေခံတယ် (spatial data type တွေကို နောက်မှာ အသေးစိတ် ထပ်ရှင်းပြထားပါတယ်) attribute data က ဒီ feature တွေဟာ ဘာလဲ ဆိုတာ ပြောတာပါ။ ဥပမာ သစ်တောတခုရဲ. တည်နေရာကို တိတိကျကျ ညွန်ပြနိုင်တဲ့ coordinate location ဟာ spatial data ဖြစ်ပြီး ၊ သစ်တောရဲ. သွင်ပြင်လက္ခဏာတွေ၊ ပေါက်ရောက်နေတဲ့ သစ်ပင် အမျိုးအစားတွေ၊ သစ်တောထဲမှာ အတွေ.ရများတဲ့ species တွေပါဝင်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို attribute data ရယ်လို. ခေါ်ပါတယ်။
Spatial data ဆိုတာ real-world မှာ ရှိနေတဲ့ လမ်းတွေ၊ အဆောက်အဦးတွေ နဲ. ဘူမိရုပ်သွင် ကဲ့သို.သော geographic object တွေကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ GIS spatial data type မှာ vector data နဲ. Raster data ဟု အဓိက (၂) မျိုးရှိပါတယ်။ Computer graphic မှာလဲ vector graphic နဲ့ raster graphic ရယ်​လို့ (၂) မျိုး ရှိပါတယ်။
Vector GIS က based on coordinates ပါ။ Coordinate ပေါ်အခြေခံတာဖြစ်ပြီး vector model မှာ point, line, polygon တွေပါပါတယ်။ စတဲ့ Point, line, polygons (areas) တွေဟာ vector data အတွက် basic symbol တွေဖြစ်ပါတယ်။ ဟိုးရှေးရှေးကတည်းက real-world features တွေကို ဒီ ၃ မျိုးနဲ့ represent လုပ်​ခဲ့ကြတာပါ။ ဥပမာ မြစ်​​တွေ၊ ​ချောင်​​တွေပါ။ အဓိကက​တော့ xy coordinates ​ပေါ်အ​ခြေခံတာဖြစ်ပြီး easting northing ကစဖတ်​ပါတယ်​။ ပထမဆုံး point ကို ​ပြောရ​အောင်​။ Vector point တွေဟာ xy coordinate တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ vector data are stored as pair of xy coordinates (latitude and longitude ) represented asapoint လို့​​ဆိုပါတယ်။ ဒီ point data ​တွေကို store လုပ်​မယ်​ table ပြန်​ဆွဲတဲ့အခါမှာ xy ဟာ spatial information ဖြစ်​ပါမယ်​၊ xy Point တခု ချင်းဆီ ရဲ့ attribute ​တွေကို လည်း ​နောက်​မှာထပ်​ရှင်း​ပေးရပါမယ်​။ နောက်ဆုံး table တခုမှာ spatial information နဲ့ attribute information ရယ်​လို့ပါလာပါလိမ့်​မယ်​။ ဒါကို Vector data structure ​ခေါ်ပါတယ်​။ လိုရင်းမှာ xy coordinates များဟာ vector points များပဲ ဖြစ်​ကြောင်း မှတ်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။
စ​ကေး​ပေါ်မူတည်​ပီးလဲ feature တခုဟာ point သို့မဟုတ်​ polygon ဖြစ်​နိုင်​ပါတယ်​။ ဥပမာ မြို့တမြို့ဟာ regional scale မှာ polygon အ​နေနဲ့ ပြနိုင်​​​သော်​လဲ global scale မှာ တော့ မြို့ boundary တွေလဲ မမြင်​နိုင်​တဲ့အတွက်​ point တခု အ​နေနဲ့ပဲ ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ မြေပုံတချပ်ကို ဘယ်လောက် အသေးစိတ် ရေးဆွဲမလဲပေါ် မူတည်ပါတယ်။ ဒုတိယ basic symbol တခုက Line ဖြစ်ပါတယ်။ point တွေကို ဆက်သွယ်ထားတာကို Line လို.ဆိုပါတယ်။​ point တခု နဲ့ တခု ကိုဆက်​ထားတာပါ။ series of coordinates လို့လဲ ​ပြောလို့ရပါတယ်​။ When you connect each point withaline inaparticular order, they becomeavector line feature ပဲဖြစ်​ပါတယ်​။ မြစ်​​တွေ​ချောင်း​တွေ လမ်း​တွေကို ကိုယ်​စားပြုနိုင်​ပါတယ်​။ ​နောက်​ဆုံး basic symbol တခုကတော့ Polygon ပါ။ ပထမဆုံး coordinate point နဲ့ ​နောက်​ဆုံး coordinates point တခု တထပ်​တည်​တသားတည်း ကျ​နေမှ (သို့မဟုတ်)​ စမှတ်​နဲ့ ဆုံးမှတ်​ အတိအကျ ပြန်​ဆုံမှ သာ polygon လို့ ​ခေါ်နိုင်​ပါတယ်​။ Two dimensional area တခု အဖြစ်​ ကိုယ်​စား​ပြု​ပေးနိုင်​ပါတယ်။ ဥပမာ အ​ဆောက်​အဦး၊ လယ်​ကွင်း​တွေ စသဖြင့်​။ ထပ်​​ပြောရရင်​ polygons as closed lines ဖြစ်​ပါတယ်​။ ဒီ​လောက်​ဆို vector data type ကို နားလည်​သ​ဘော​ပေါက်​မယ်​ထင်​ပါတယ်​။
Vector type ပြီးတဲ့အခါ နောက် spatial data type တမျိုး ဖြစ်တဲ့ Raster type ကို ဆက်​ပြောပါမယ်။ raster က computer မှာ တကယ်​ကို အသုံးများတဲ့ graphic တခု ဖြစ်​ပြီး Pixel ​တွေ​ပေါ် အ​ခြေခံပါတယ်​။ ​​ grid cell ​တွေ ​ပေါ် အ​ခြေခံ ပါတယ်​။ Raster data is made up of pixels ( also referred to as grid cells) ဖြစ်​ပါတယ်​။ Information ​တွေကို cell အ​နေနဲ့ စုထားတာပါ။ Cellular organization of information ​ပေါ့။ row တခု နဲ့ column တခု ဆုံတဲ့ ​နေရာက cell တခု ဖြစ်​ပါလိမ့်​မယ်​။ information stored in the cells as cell values လို့ ​ဆိုပါတယ်​။ ဒီ cell ​တန်ဖိုးတွေဟာ soil type တွေလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်၊ forest type တွေလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်၊ Elevation data တွေလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်၊ rain fall data တွေလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒီလို အမျိုးမျိုးသော တန်ဖိုးတွေကို cell တွေထဲမှာ သိမ်းထားတာပါ။ Vector type နဲ. မတူတာက Vector မှာ xy က spatial information ဖြစ်ပေမယ့် raster မှာ တော့ row and column (cell size) က spatial information ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို cell တွေမှာ base လုပ်ပြီးသိမ်းဆည်းတဲ့ စနစ်ကို Raster GIS လို.ခေါ်ပါတယ်။ အနှစ်ချုပ် ပြန်ပြောရရင် raster data တွေက pixel တွေနဲ. အလုပ်လုပ် ပါတယ်။ vector data တွေက xy coordinate တွေ ပါပါမယ်။ geospatial data တွေကို store လုပ်ဖို.ရန်အတွက် raster နဲ. vector (၂) မျိုးလုံးကို သုံးလေ့ရှိပါတယ်။ Elevation နဲ. landuse map တွေကို raster data နဲ. ကိုယ်စားပြုပြီး Polital/Administrative Boundaries တွေကိုတော့ vector data နဲ. ကိုယ်စားပြု တင်ပြရပါတယ်။
Posted by Kaung Si Thu at 10:22 AM No comments:
ကျွန်တော်က ပုသိမ်တက္ကသိုလ် ၊ ဘူမိဗေဒ ဌာန မှာ သရုပ်ပြ အနေနှင့် လက်ရှိတာဝန်ထမ်းထမ်းဆောင်နေပါတယ်။ ဒီ ဘလော့မှာ ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတဲ့ ပညာရပ်ဆိုင်ရာများကိုသာ ဦးစားပေးဖော်ပြထားပါတယ်။
ကျနော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မျက်လုံးနဲ့မြင်နိုင်တဲ့ ရေလှိုင်းလို လှိုင်းမျိုးလည်း ရှိပါတယ်။ အာရုံနဲ့ သိရှိခံစားနိုင် တဲ့ အပူလှိုင်း၊ အသံလှိုင်းလို လှိုင်းမျိုးတွေလည်း ရှိပါတယ်။ လှိုင်းသဘာဝရှိတာ သိပေမယ့် လှိုင်းမှန်း ကွဲကွဲ ပြားပြား မြင်နိုင်စွမ်း မရှိတဲ့ အလင်းလှိုင်း၊ ရေဒီယိုလှိုင်းလိုမျိုး လှိုင်းတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒီတော့ လှိုင်းတွေ အကြောင်းကို ဂဃနဏ နားလည်နိုင်ဖို့အတွက် လှိုင်းတွေ ဘယ်လို အမျိုးအစားခွဲခြားထားတယ်ဆိုတာကို သိရှိနားလည်သင့်ပါတယ်။ လှိုင်းတွေကို အမျိုးအစားခွဲပုံကတော့ မျိုးစုံပါတယ်။ လှိုင်းသယ်ဆောင်ဖို့ ကြားခံ နယ်လိုတဲ့လှိုင်း၊ မလိုတဲ့လှိုင်း၊ လှိုင်းလမ်းကြောင်းနဲ့ လှိုင်းတုန်ခါမှု အပြိုင်ဖြစ်နေတဲ့လှိုင်း၊ ထောင့်မတ်ကျနေ တဲ့လှိုင်း၊ ရပ်ဝေးထိ ပျံ့နှံ့တဲ့လှိုင်း၊ လှိုင်းထုတ်ရာ အနီးတ၀ိုက်မှာပဲ နေတဲ့လှိုင်း စသည်ဖြင့် အမျိုးအစား အတော်များများ ခွဲခြားလို့ရတာကို တွေ့ရပါတယ်။
လှိုင်းတစ်နေရာက တစ်နေရာသို့ ပို့ဆောင်ဖို့အတွက် ကြားခံနယ်လိုတဲ့ လှိုင်းအမျိုးအစားကို ဒြပ်သားလှိုင်း ( mechanical wave ) လို့ ခေါ်ဆိုပါတယ်။ ရေလှိုင်း၊ အသံလှိုင်းတွေဟာ ဒြပ်သားလှိုင်းတွေရဲ့ နမူနာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒြပ်သားလှိုင်းတွေမှာ ကြားခံနယ်တွေရဲ့ အမှုန်တွေရဲ့ တုန်ခါမှုတွေနဲ့ လှိုင်းတွေကို တစ်နေရာ က တစ်နေရာသို့ ပို့ဆောင်ပေးရတဲ့အတွက် အစိုင်အခဲ၊ အရည်၊ အငွေ့ ဆိုတဲ့ ဒြပ်သားကြားခံနယ်မရှိရင် mechanical wave တွေ မဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါဘူး။ လပေါ်မှာ အသံပို့ဆောင်လို့ မရတာဟာ လပေါ်မှာ အသံကို ပို့ဆောင်ပေးမယ့် ဒြပ်သားကြားခံနယ်ဖြစ်တဲ့ လေမော်လီကျူးလေးတွေ မရှိလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လှိုင်းစထုတ်ရာ ပင်ရင်းက အီလက်ထရွန်အမှုန်တွေ တုန်ခါခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လှိုင်းတွေကို လျှပ်စစ် သံလိုက်လှိုင်း ( electromagnetic waves ) လို့ ခေါ်ပါတယ်။ လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းလို့ ခေါ်ဆိုရခြင်းက တော့ ဒီလှိုင်းအမျိုးအစားမှာ လျှပ်စစ်စက်ကွင်းနဲ့ သံလိုက်စက်ကွင်းတို့ဟာ တစ်ခုကို တစ်ခု ထောင့်မတ်ကျ တုန်ခါပြီး လှိုင်းနဲ့အတူ လိုက်ပါလာလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ တစ်ခုကိုတစ်ခုတင် ထောင့်မတ်ကျတာ မဟုတ်ပါဘူး။ လှိုင်းသွားရာ မူလလမ်းကြောင်းနဲ့လည်း ထောင့်မတ်ကျတုန်ခါနေကြပါသေးတယ်။ စက်ကွင်း အသွင်နဲ့ တစ်နေရာက တစ်နေရာသို့ ကူးပြောင်းတဲ့လှိုင်းအမျိုးအစားဖြစ်တာကြောင့် သူတို့ကို ပို့ဆောင်ပေး ဖို့ ဘယ်ဒြပ်သား ကြားခံနယ်မှ မလိုအပ်ပါဘူး။ အလင်းလှိုင်းတွေ ( light waves )၊ အပူလှိုင်းတွေ ( infrared radiation ( IR ) ) ၊ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်တွေ ( ultraviolet radiation ( UV ) ) ၊ ရေဒီယိုလှိုင်း တွေ ( Radio waves )၊ ဓာတ်မှန်ရောင်ခြည်တွေ ( X-rays ) နဲ့ အနုမြူရောင်ခြည်တွေ ( gamma rays ) တွေဟာ လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လှိုင်းသွားရာလမ်းကြောင်းနဲ့အတူ ရှေ့တိုးနောက်ငင် ရွေ့လျားနေတတ်သော လှိုင်းအမျိုးအစားကို အလျား လိုက်လှိုင်း သို့မဟုတ် ကျုံ့လှိုင်း ( longitudinal waves ) လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒီလိုလှိုင်းမျိုးမှာ လှိုင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်တဲ့ ကြားခံနယ်ရဲ့ တုန်ခါမှုလမ်းကြောင်းဟာ လှိုင်းသွားရာလမ်းကြောင်းနဲ့ အပြိုင်ဖြစ်နေတာကို တွေ့ ရမှာပါ။ အသံလှိုင်းတွေ၊ စပရိန်ကို ဖိသိပ်လိုက်လို့ ရှေ့တိုး နောက်ငင် တုန်ခါမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်တဲ့ လှိုင်းတွေ၊ မြေငလျင်လှိုင်းတွေဟာ အလျားလိုက်လှိုင်းအမျိုးအစားတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အလျားလိုက်လှိုင်းတွေမှာ လှိုင်းလာရာအတိုင်း ရှေ့တိုးနောက်ငင် ဖိသိပ်လိုက်တဲ့အတွက် အမှုန်သိပ်သည်းခြင်း များသွားတဲ့ ဖိသိပ်နယ် ( compression ) နဲ့ ဖိသိပ်နယ်ထဲ အမှုန်တွေ တိုးဝင်သွားတဲ့အတွက် အမှုန်သိပ်သည်းခြင်း လျော့ပါးသွားတဲ့ လျော့ပါးနယ် ( rarefaction ) နယ်ပယ်နှစ်ခု ပါဝင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ နယ်ပယ်နှစ်ခု အလှည့် ကျ ဖြစ်ပေါ်ရင်းနဲ့ လှိုင်းတွေရဲ့ တုန်ခါမှုတွေဟာ လှိုင်းရဲ့ လားရာနဲ့အပြိုင် ရွေ့လျားပါတယ်။
လှိုင်းသွားရာလမ်းကြောင်းနဲ့ ကြားခံနယ်အမှုန်တွေရဲ့ တုန်ခါမှုလမ်းကြောင်းတို့ ထောင့်မတ်ကျနေတဲ့ လှိုင်း အမျိုးအစားကို ကန့်လန့်လွှဲလှိုင်း ( transverse wave ) လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ကန့်လန့်လွှဲလှိုင်းကို တွေ့နိုင်တဲ့ အကောင်းဆုံးနမူနာကတော့ တုန်ခါနေတဲ့ ကြိုးလှိုင်း ( waves inavibrating string ) ပါပဲ။ ကြိုးတစ်ချောင်းကို တိုင်တစ်တိုင်မှာ ချည်ထားလိုက်ပါ။ အခြားတစ်ဖက်ကို လက်ကိုကိုင်ပြီး အပေါ်အောက် လှုပ်ရှားပေးလိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် ကြိုးမှာ လှိုင်းတွေ ဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒီလှိုင်းတွေဟာ စတင်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ လူရဲ့ လက်ကနေ ချည်ထားတဲ့နေရာသို့ အထက်အောက် တုန်ခါရင်း ရွေ့လျားသွားကြတာ တွေ့ရပါလိမ့် မယ်။ လှိုင်းသွားတဲ့ လမ်းကြောင်းက လက်ကနေ ချည်ထားတဲ့နေရာသို့ ဖြစ်ပြီး တုန်ခါမှုလမ်းကြောင်းက တော့ အထက်အောက် လမ်းကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီလို လှိုင်းသွားရာလမ်းကြောင်းနဲ့ ကန့်လန့် လွှဲပြီး တုန်ခါနေတဲ့လှိုင်းတွေကို ကန့်လန့်လွှဲလှိုင်း ( transverse wave ) လို့ ခေါ်ဆိုခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အလင်းလှိုင်းဟာလည်း ကန့်လန့်လွှဲလှိုင်းအမျိုးအစားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လှိုင်းသန့်ခြင်း ( polarization ) ဂုဏ် သတ္တိဟာ ကန့်လန့်လွှဲလှိုင်းတွေမှာပဲ ဖြစ်ပေါ်ပါတယ်။
လှိုင်းစထုတ်ရာ ပင်ရင်းက ဝေးရာသို့ ပျံ့နှံ့သွားနိုင်တဲ့ လှိုင်းအမျိုးအစားကို ရှေ့တိုးလှိုင်း ( progressive wave ) လို့ ခေါ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ သူတို့ သွားရာလမ်းကြောင်းမှာ အတားအဆီးတွေရှိခဲ့ရင်လည်း အဲ့ဒီ အတားအဆီးတွေကို ကွေ့ပတ်သွားနိုင်စွမ်းရှိကြပါတယ်။ ရေလှိုင်းတွေ၊ အသံလှိုင်းတွေဟာ ရှေ့တိုးလှိုင်း တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လှိုင်းဟာ ကန့်သတ်ထားတဲ့ နယ်နမိတ်အတွင်းမှာပဲ တုန်ခါရတဲ့အတွက် စထုတ်တဲ့နေရာက ဝေးရာသို့ မပျံ့နှံ့နိုင်ဘဲ စထုတ်တဲ့ နေရာမှာပဲ အသွားအပြန် တုန်ခါနေရတဲ့ လှိုင်းအမျိုးအစားကိုတော့ တန့်လှိုင်း ( stationary waves ) လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဥပမာ ဂစ်တာတစ်ခုမှာ တပ်ထားတဲ့ ကြိုးရဲ့ တုန်ခါလှိုင်းကို လေ့လာကြည့်ပါ။ သူ့ရဲ့ တုန်ခါမှုဟာ ဂစ်တာကြိုးတစ်လျှောက်မှာပဲ ကန့်သတ်ခံထားရတဲ့အတွက် ပြင်ပကို ထွက်လို့မရပါဘူး။ လေမှုတ်တူရိယာတွေမှာ လေတုန်ခါမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်တဲ့ လှိုင်းတွေဟာ လည်း အလားတူပါပဲ။ လေမှုတ်တူရိယာအတွင်းမှာပဲ ကန့်သတ်ခံထားရတဲ့အတွက် ပြင်ပကို မရောက်ရှိနိုင် ပါဘူး။ ဒီလို လှိုင်းမျိုးဟာ တန့်လှိုင်းတွေပဲ ဖြစ်ကြပါတယ်။
လှိုင်းတွေကို အထက်ပါအတိုင်း အမျိုးအစားများစွာ ခွဲခြားထားပေမယ့်လည်း ဘယ်လှိုင်းဟာ ဘယ်အမျိုး အစား၊ ဘယ်လှိုင်းကတော့ ဘယ်အမျိုးအစားဆိုပြီး သတ်မှတ်ခွဲထားမှုတော့ မရှိပါဘူး။ လှိုင်းတစ်ခုဟာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ လက္ခဏာတွေ ရှိခဲ့ရင် အဲ့ဒီ လှိုင်းအမျိုးအစားထဲ ၀င်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ အလင်း လှိုင်းဟာ လှိုင်းလားရာနဲ့ ထောင့်မတ်ကျ တုန်ခါတဲ့အတွက် ကန့်လန့်လွှဲလှိုင်း ( transverse wave ) အမျိုး အစားထဲ ၀င်သွားသလို စထွက်ရာဒေသက ဝေးရာကို ပျံ့နှံ့သွားတဲ့လှိုင်းလည်း ဖြစ်တာကြောင့် ရှေ့တိုး လှိုင်း ( progressive wave ) အမျိုးအစားလည်း ဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။ အလင်းလှိုင်းဟာ လျှပ်စစ်သံလိုက် စက်ကွင်းနဲ့ သွားလာတဲ့လှိုင်းဖြစ်နေပြန်တော့ လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်း ( electromagnetic wave ) အမျိုး အစားထဲလည်း ပါနေပြန်ရော။
အသံလှိုင်းရဲ့ တုန်ခါမှုဟာ လှိုင်းသွားရာ လမ်းကြောင်းနဲ့ အပြိုင်ဖြစ်နေလို့ သူဟာ အလျားလိုက်လှိုင်း ( longitudinal wave ) အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ စတင်ထုတ်တဲ့နေရာက ဝေးရာကို ပျံ့နှံ့နိုင်လို့ progressive wave ဖြစ်ပြန်တယ်။ သူသွားဖို့ အစိုင်အခဲ၊ အရည်၊ အငွေ့ဆိုတဲ့ ဒြပ်သားကြားခံနယ် လိုအပ်တဲ့အတွက် ဒြပ်သားလှိုင်း ( mechanical wave ) အမျိုးအစားထဲလည်း ပါပြန်တယ်။ ကြိုးတုန်ခါတဲ့လှိုင်းကတော့ လား ရာနဲ့ ထောင့်မတ်ကျ တုန်ခါတာမို့ transverse wave ဖြစ်ပါတယ်။ ကြိုးတစ်လျှောက်မှာသာ တုန်ခါနိုင်တာ မို့ stationary wave ဖြစ်ပြန်တယ်။ ကြိုးဆိုတဲ့ အစိုင်အခဲ ကြားခံနယ်လိုအပ်တာမို့ mechanical wave လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလောက်ဆိုရင် လှိုင်းတွေကို အမျိုးအစား ခွဲခြားတတ်လောက်ပြီလို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ရေလှိုင်း ( water wave ) နဲ့ ငလျင်လှိုင်း ( seismic wave ) တွေကတော့ လှိုင်းတစ်မျိုးထဲလို့ ပြောလို့ မရတဲ့ လှိုင်းအရောတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လို လှိုင်းတွေများ ရောနေတာပါလဲ။ အလျားလိုက်လှိုင်း ( longitudinal wave ) တွေနဲ့ ကန့်လန့်လွှဲလှိုင်း ( transverse wave ) တို့ ရောနေတာပါ။ ရေလှိုင်းတွေရဲ့ မော်လီကျူးတွေရဲ့ တုန်ခါမှုတွေဟာ ရေလှိုင်းသွားရာ လမ်းကြောင်းမှာ နာရီလက်တံပတ်တဲ့လမ်းကြောင်း အတိုင်း ( clockwise direction ) တုန်ခါပါတယ်။ စက်ဝိုင်းပတ်ပုံ တုန်ခါတဲ့အခါ လှိုင်းလမ်းကြောင်းနဲ့ အပြိုင် အလျားလိုက်တုန်ခါမှုရော၊ လမ်းကြောင်းနဲ့ ထောင့်မတ်ကျတဲ့ တုန်ခါမှုရော ဖြစ်ပေါ်တော့တာပါပဲ။ အလျားလိုက်တုန်ခါတဲ့အခါမှာ longitudinal wave အသွင်ပြုမူပြီးတော့ ဒေါင်လိုက်တုန်ခါနေတဲ့အချိန်မှာ တော့ transverse wave အသွင် ပြုမူပါတယ်။ ရေလှိုင်းမှာ အဓိကဖြစ်ပေါ်တာကတော့ transverse wave ပဲဖြစ်ပါတယ်။ longitudinal wave ကတော့ လှိုင်းရဲ့ မျက်နှာပြင်က မော်လီကျူးလေးတွေမှာသာ ဖြစ်ပေါ် ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရေလှိုင်းမှာ တုန်ခါမှု အမျိုးအစားနှစ်မျိုးစလုံး တွေ့ရတာကြောင့် သူ့ကို အလျားလိုက် လှိုင်းနဲ့ ကန့်လန့်လွှဲလှိုင်း အရောလို့ပဲ ပြောရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ငလျင်လှိုင်း ( seismic wave ) တွေဟာ ကမ္ဘာ့အတွင်းပိုင်းတစ်နေရာက စတင်ပြီး ကမ္ဘာ့မြေပြင်ပေါ်ကို လှိုင်း အမျိုးအစား နှစ်မျိုးနဲ့ ပျံ့နှံ့လာပါတယ်။ ပထမဆုံးဖြစ်ပေါ်တဲ့လှိုင်းကတော့ အလျားလိုက်လှိုင်းဖြစ်ပါ တယ်။ မြေကမ္ဘာအတွင်းပိုင်းကနေ အပေါ်ဘက်မျက်နှာပြင်သို့ ဖိသိပ်နယ်၊ လျော့ပါးနယ် အလှည့်ကျဖြစ်ပေါ် ရင်း လှိုင်းလားရာနဲ့ အပြိုင် သယ်ဆောင်သွားပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ပေါ်တဲ့ အလျားလိုက်လှိုင်း ( longitudinal wave ) ကို P wave ( Primary wave ) လို့ ခေါ်ပါတယ်။ P wave ဟာ ကမ္ဘာ့မျက်နှာပြင်မှာ ကြီးမားတဲ့ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကို မဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါဘူး။ ဒုတိယဖြစ်ပေါ်တဲ့လှိုင်းကတော့ ကန့်လန့်လွှဲလှိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူ ဟာ P wave ရောက်ရှိပြီး စက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာမှသာ ရောက်ရှိပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ပေါ်တဲ့ ကန့်လန့်လွှဲလှိုင်းကိုတော့ S wave ( Secondary wave ) လို့ ခေါ်ပါတယ်။ သူဟာ မြေလွှာကို တွန့်ခေါက်စေတဲ့ လှိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက် သူဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင် အပျက်အစီး အဆုံးအရှုံး များပါတယ်။ တိုက်တာ အဆောက် အဦတွေကို ပြိုကျပျက်စီးစေပါတယ်။ ပင်လယ်ပြင်မှာ ဗဟိုပြုခဲ့ပြီး ကုန်းတွင်းပိုင်း အထိ ပျံ့နှံ့ခဲ့တဲ့ ဆူနာမီရေလှိုင်း ( tsunami wave ) တွေဟာလည်း ငလျင်လှိုင်းတွေက အစပြုခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Kaung Si Thu at 1:42 AM No comments:
အယ်လ်ဂိုရစ်သမ်ဆို တာက set of steps to carry out some task (အလုပ်တခုခုကို လုပ်ဖို့လုပ်ငန်းအဆင့်တွေ ရဲ့ အစု) ဖြစ်ပါတယ်။ ပြောရရင် ထမင်းချက်မယ်ဆိုပါတော့ ။ ဒါက task(အလုပ်ပါ)။ ဆန်ဝယ်မယ် ၊ ပြီးရင် ဆန်ဆေးမယ်၊ ပြီးရင် ရေထည့်မယ် ၊မီးမွှေးမယ်၊ မီးဖိုပေါ်တင်မယ်၊ ထမင်းရည် ငှဲ့ မယ်၊ နပ်ရင် မီးဖိုပေါ်က ချမယ်။ ဒါတွေက အဆင့်တွေပါ။
Algorithm diagram တွေက ဒီ အဆင့်တွေကို ဘာပြီးရင် ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာ
မျှားတွေနဲ့ ညွှန်ပြထားပါတယ်။ အဆင့်တိုင်းမှာ ထူးခြားချက်က တော့ yes/no question တွေကို ဖြေရ
တာပါ ။ yes or no ပေါ်မူတည်ပြီး သွားရတဲ့ လမ်းကြောင်း ၊လုပ်ရမယ့်အလုပ်၊ နောက်တဆင့် ဟာ
ကွဲပြားသွားပါတယ်။ ဒီ algorithm တွေ ရဲ့အဆင့်တခုခြင်းကို mechanically လုပ်ဖို့ ဆိုရင် အဓိက
ကတော့ ရှေ့ အဆင့်က Input ကိုယူပြီး အဖြေ အဖြစ်yes or no ကို ပြန်ထုတ်ပေးပြီး နောက်တဆင့်ကို
ပေးရတာပါ။ ဒါကို လုပ်နိုင်စွမ်း ရှိတဲ့ သင်္ချာမော်ဒယ်ကို finite automaton လို့ ခေါ်ပါတယ်။
finite automaton အကြောင်းမသွားခင် သူ့ နောက်က အိုင်ဒီယာ (ဒါမှမဟုတ် probabilistic counterpart )တခုဖြစ်တဲ့ Markov’s chain အကြောင်းပြောပြချင်ပါတယ်။
Probability သင်္ချာရဲ့ ခေတ်ဦးမှာ Law of large Number ဆိုတဲ့ လောတခု ဟာ အရှိန်အဝါကြီးခဲ့ပါတယ်။ သူကဘာပြောချင်တာလဲ ဆိုတော့ အံစာတုန်းလို ကျပမ်း ကျချင်တာကျနေတဲ့ အရာတွေဟာ အကြိမ်
ရေ သိပ်များ(Large number ဖြစ်လာတဲ့အခါ)လာတဲ့ အခါမှာ သူတို့ ရဲ့ ပျံ့ နှံ့ပုံ(distribution)ဟာ ပုံစံတခု
စီချည်းကပ်လာတယ်ပေါ့။ ဆိုပါတော့ အံစာ တစ်တုံးပဲခေါက်ရင် စစချင်းခေါက်တဲ့ ဆယ်ကြိမ်လောက်
အတွင်းမှာ တချို့အပေါက်တွေက ပိုကျမယ်ပေါ့ ဒါပေမဲ့ အကြိမ် သန်းချီ ခေါက်ရင်တော့ အားလုံး
ရဲ့ ကျ နိုင်ခြေ က ၁/၆ ပဲ ဖြစ်မယ်။ ၆ ခုလုံး အတူတူပေါ့ ။ ဒါကို ပျံနှံ့ ပုံခေါ်ပြီး အကြိမ်ရေ များရင် ဒီပျံနှံ့ 
ပုံဆီ ရောက်တာကို Law of Large Number လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒါကို လက်မခံတဲ့ လူတယောက်ရှိတယ်။ သူ့ ကပေဗယ် နီကရာဆော့ဗ် ပါ။ သူက Law of large number မှန်ရတာဟာ အံစာတုံး တကြိမ်ခေါက်တာနဲ့နောက်တကြိမ် ခေါက်တာကြားမှာ independent
(မမှီခိုလို့ ) ဖြစ်လို့ လို့ ဆိုပါတယ်။ ရှေ့က ခေါက်တဲ့ရလာဒ်ဟာ နောက်ခေါက်တာ ပေါ်မှာ သက်ရောက်မှု
မရှိဘူးပေါ့ ။ ဒါကိုပြောချင်တာ။ ဒါကို မားကော့ဗ် Markov က မကြိုက်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် မားကော့ဗ်
ချိန်း ကို ဒီအဆိုမမှန်ဘူးဆိုတာ သက်သေပြဖို့ ထွင်ခဲ့တာပါ။
မားကော့ဗ် ချိန်း (မားကော့ဗ် ကွင်းဆက်) ဟာ သံကြိုးကွင်းများဆက်နေသလိုပါပဲ။ ရှေ့ က ဖြစ်နေတာနဲ့
ကပ်ရပ်နောက်က ဖြစ်တာဟာ ဆက်စပ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျန်တာတွေနဲ့ တော့ မဆက်စ်ပါဘူး။ နောက်ဖြစ်လာမှာက ခု လက်ရှိပစ္စပ္ပုန် အခြေအနေပေါ်ပဲ မူတည်ပါတယ်။ အတ်ိတ်နဲ့ အနာဂါတ်ဟာ ဆက်စပ်မှုမရှိပါဘူး။ အတိတ်နဲ့ အနာဂါတ်ဆက်နေရတဲ့ အကြောင်းက ပစ္စပ္ပုန်က ကြားထဲက ချိတ်ပေးထားလို့ ပါ။ ပစ္စပ္ပုန် ကိုသာဖယ်လိုက်ရင် အတိတ် နဲ့အနာဂါတ်ဟာ သံကွင်းဆက်ကြိုး က ကွင်းတခုကို ဖယ်လိုက်သလို မျိုး ဆက်စပ်မနေတော့ ဘဲ ၂ပိုင်း ဖြစ်သွား ပါမယ်။
ဒီတော့ နောက်အလှည့် ဘာကျမလဲ ဆိုတာက ခုအလှည့် ဘာကျလဲဆိုတာပေါ် မှီခို ပြီး ဖြစ်နေတာ
ကို မားကော့ဗ် အရည်အချင်းလို့ ခေါ်ပါတယ်။ မားကော့ဗ် အရည်အချင်းကိုလိုက်နာတဲ့ ဖြစ်စဉ်မှန်သမျှကို
မားကော့ဗ် ချိန်းဟာ လုံးဝ independent မဟုတ်သလို လုံးလုံး dependent လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ သူက ရှေ့ ဖြစ်စဉ်ကို ပဲ မှီခိုနေတာပါ။ ရှေ့ ဖြစ်စဉ်ကနေ နောက်ဖြစ်စဉ်ကိုကူးရာမှာ ကျပမ်း(probability) နဲ့ ကူးပါတယ်။ နဲနဲ ရှုပ်သွားရင် ဥပမာလေးပေးပါမယ်။ မိုနိုပိုလီ ကစားဘူးကြမှာပါ။ မိုနိုပိုလီမှာ အကွက်ပေါင်း ၄၀ ရှိပြီးကိုယ့် အလှည့်မှာ အံစာ၂တုံး ကို ခေါက်ရာမှာ ဆွိ ကျရင် ၃ ကြိမ်ထိ ခေါက်ခွင့်ရှိပါတယ်။ ၃ ကြိမ် ဆွိဖြစ်ရင်တော့ ဂျေး ထဲ ရောက်ပါတယ်။ အကွက် ၄၀ အမြှောက် ၃ ကြိမ်မို့စုစုပေါင်း ၁၂၀ အခြေအနေ(state)ရှိပါတယ်။ ပေးထားတဲ့ တချိန်ချိန်မှာ ကိုယ်က အခြေအနေ တခုခု မှာ ရှိမှာပါ ။ ဒီအခြေကနေ နောက် အခြေပြောင်းဖို့ က ဒီ အခြေကနေ သွားလို့ ရတဲ့ အကွက်တွေဆီပဲ သွားနိုင်ပါတယ်။ အကွက်တိုင်းကို မသွားနိုင်ပါဘူး။ သွားဖို့ အတွက် အံစာခေါက်ပြီး ကျပမ်း သွားရတာပါ။ ဒါကြောင့် မားကော့ဗ် ချိန်းလို့ ခေါ်နိုင်ပါတယ်။ အောက်မှာ ပုံ ၂ပုံပြထားပြီး ပထမပုံက တလှည့် ခေါက်
ပြီးကျနိုင်ခြေတွေပါ ။ ကျနိုင်ခြေတွေက မတူပါဘူး။ ဒုတိယပုံက ၇၅ ခါ ခေါက်ပြီး ကျနိုင်ခြေ တွေပါ။ ဂျေး
ကလွဲရင် အားလုံးဟာ ကျနိုင်ခြေ နီးပါးတူ တာကိုတွေ့ ရပါမယ်။ ဒီနည်းနဲ့ မားကော့ဗ်ဟာ အကြိမ်ရေ
များစွာလုပ်ပြီးနောက်မှာ Law of Large numberဟာ dependent ဖြစ်ရင်လည်းမှန်ကြောင်း သက်သေ
မားကော့ဗ်ချိန်း ဖြစ်စဉ်ဟာနေရာတကာမှာတွေ့ ရပါတယ်။ Brownian motion , random walk , ရေခွက်ထဲမှာ မှင်စက်ပျံ့ နှံ့ ပုံ ၊ စားသုံးသူများရဲ့ တံဆိပ် ပြောင်းသုံးနှုန်း ၊ အလည်သွားတဲ့ မြို့ တွေ ကို့ လည်ပါတ်ပုံစသဖြင့် ဥပမာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ Finite automaton ဟာလည်း မားကော့ဗ် ချိန်း
တမျိုးပါ။ ဒါပေမဲ့ တချို့automaton တွေကတော့အခြေအနေ တခုကနေ တခုပြောင်းရာမှာ ကျပမ်း
(probability) ကို မသုံးပဲ အပြင်က Input ကို သုံးတဲ့ အတွက် deterministic လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ Input ကိုယ်တိုင်က probabilistic ဖြစ်ရင်တော့ မားကော့ဗ် ချိန်းကို finite automaton နဲ့ 
ကိုယ်စားပြု နိုင်ပါတယ်။ ကြုံလို့ ပြောရရင် ဒိုမီနို အကျိုးဆက်ဆိုတာကြား ဖူးမှာပါ။ ဒိုးဇာတ်တွေ ထောင်ထားပြီး အတန်းရှည် လုပ်ထားတာမျိုးပေါ့။ ဒီဘက်က အစ ဒိုးကို လှဲ လိုက်ရင်အဆုံးဒိုးထိ ဆက်တိုက်လဲသွားတာမျိုးပေါ့။ အဲဒါမားကော့ဗ် ချိန်းပါပဲ။ နိုင်ငံရေး စီးပွားရေး လူမှုရေးတွေ မှာ ဒီ အကျိုးဆက်ကို မကြာခဏ မြင်နေရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အမြဲတမ်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
ကြာတော့ လူတွေက ထင်ကြတာက နောက်ဆုံးဒိုးက ကိုယ်ဖြစ်တယ်ဆိုပါတော့ ကိုယ်လဲတာ ရှေ့ ဆုံး
ကဒိုးလဲတာကြောင့် လို့ ထင်လေ့ ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီအထင်ဟာ အမြဲ မမှန်ပါဘူး။
တကယ်တော့ အဲ့လိုအဝေးကြီးကဟာ တခုက အခု လာ အကျိုးပေးဖို့ 
ဆိုရင် ဒါဟာ မားကော့ဗ် ချိန်းတခု ဖြစ်နေမှ ရပါမယ်ဒါ ပေမဲ့ မားကော့ဗ် ချိန်း ကိုယ်တိုင်က ဟိုးရှေ့ က ဟာ
ကြောင့် မဟုတ်ဘဲ ကိုယ်နဲ့ ကပ်ရပ် ဒိုး လဲ လို့ သာလဲရတာပါ။ ခု ဒိုမီနို ဥပမာ မှာ ကိုယ်နဲ့ ကပ်ရပ်ဒိုး
နဲ့ကိုယ်ကြားမှာ ဖြစ်ဖြစ် တခြား ကြိုက်ရာ ဒိုး၂ခုကြားမှာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ် ခြားထားတဲ့ အကွာအဝေးဟာ
ဒိုးရဲ့ အလျားထက် ပိုခဲ့မယ်ဆိုရင် ရှေ့ ဆုံးဒိုကို လှဲခဲ့လည်း နောက်ဆုံးဒိုးက လဲမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
မားကော့ဗ် ချိန်းက လက်ရှိ အခြေအနေ ကသာနောက်ချက်ခြင်းဖြစ်လာမှာကို အကျိုးသက်ရောက်
ကြောင်း ရှင်းပြနေပါတယ်။ မားကော့ဗ်ချိန်း အတိုင်းဖြစ်နေတဲ့ finite automaton တွေ အကြောင်း နောက်
ပို့ စ်မှာ ဆက်လေ့လာကြပါစို့ ။
Posted by Kaung Si Thu at 10:51 PM No comments:
Kst Geol | Create Your Badge
Earthquake Seismology Research links
Structural Geology and Tectonics Blog
Paleoseismic Database (French)
IASPEI - Seismology and Physics of the Earth's Interior
COSMOS - Strong Motion Observation Systems
Active Tectonics, Paleoseismology and Associated Hazards
GIS and Remote Sensing data sources and informations
Cartograpgy and GIS
Create Geology Map
Digital Cartographic Standard for Geology Map
Learn Arc GIS
MIT GIS Course
NASA Landset Science
Steves's Geology Blog
Structural Geology Lectures
Astronomy for Begnners
Mathematical Methods for Geology
Basic Math in Geosciences
Active Tectonic Evaluation (1)
AOGS 2017 (1)
Diamond Exploration Special Talk (1)
Earthquake Geology of Myanmar (1)
Earthquake New (1)
Environmental Management Workshop (1)
Gaw Yan Gyi Field (1)
GEarthView Plugin အသုံးပြုနည်း (1)
Geodetic Survey in Myanmar (1)
Geology Notes (1)
Geology of Myanmar (4)
Geology students Camp fire night (1)
Gold become ghost ဖုန်းဆိုးမြေ လက်ပံတောင်းတောင်ဒေသကို စွန့်ခွာခြင်း (1)
Handheld XRF Analyzer Presetnation (1)
Heinda Mine (1)
Kyaukkyan Fault (1)
Mingun Filed Trip (1)
Myanmar Amber (1)
Myanmar Earthquake Sumposium (1)
Myanmar Foraminiferal Special Talk (1)
Myanmar Geological Map (1)
OneMap Myanmar မှ ArcGIS Basic မြန်မာပြန် (1)
Paleoseismic Trenching (2)
Pathein University (1)
Professor Charles A. Nittrouer (1)
Profile Tool Plugin အသုံးပြုနည်း (1)
Research Proposal Presentation (1)
Sagaing Fault (1)
Sagaing fault valley (1)
Sagaing Fault Zone Geology Map (1)
Sagaing-Mingun Area (1)
Second Myanmar Japan Symposium (2)
Sedimentology Special Talk (1)
Send2GoogleEarth Plugin (1)
SRTM DEM data Download (1)
Sulfer Tutorial (1)
Tharzi Field Trip (1)
The Best Geologist Prize 2016 (1)
Third Myanmar Japan symposium 2016 (2)
ကမ္ဘာကျော်ပေမယ့် မြန်မာ မကျော်တဲ့သူ (1)
ငလျင်​ပမာဏ နဲ့ ပြင်းအား (1)
ငလျင်နှင့် မြေအောက်ရေ အရေး (1)
စကြဝဠာ၏ အစကို ရှာဖွေ တွေ့ရှိခြင်း (1)
တရုတ်​ပြည်​၏ ငလျင်​တိုင်းစက်​တီထွင်​သူ ဆရာကျန်းဟိန်​（張衡） (1)
ဒစ်ဂျစ်တယ် ကွင်းဆင်းမြေပုံရေးဆွဲခြင်း (1)
ပင်လယ်ထဲက တွင်းထွက်ပစ္စည်းများ (1)
မြန်မာနိုင်ငံ ဘူမိသိပ္ပံပညာရပ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခြင်း (1)
ရှာဖွေရေး ဘူမိဓါတုဗေဒ (Exploration Geochemistry) (1)
ဥမင်ဒီဇိုင်းလမ်းညွှန် အပိုင်း(၁) (1)
Geosciences Scholarships - Myanmar
Kaung Sithu, Demonstrator, Department of Geology, University of Yangon, Myanmar. Awesome Inc. theme. Powered by Blogger.